अर्थ/बाणिज्य Archives - Page9of 12 - Mobile Pati Online
सत्र करोडको लगानीको अत्याधुनिक रिसोर्ट
मुस्ताङ – मुक्तिनाथमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गर्दै रु १७ करोडको लगानीमा र्मिकस्थल अत्याधुनिक रिसोर्ट बन्ने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनका अमेरिका क्षेत्रीय संयोजक सोनाम लामाको लगानीमा निर्माणधिन उक्त
‘क’ बर्गका २८ वाणिज्य बैंक: कसको कति नाफा ?
काठमाडौ– गत आर्थिक बर्षमा एक दुई वटा बैंक वाहेक नेपालका ‘क’ बर्गका २८ वाणिज्य बैंकले नाफा उच्च वृद्धि गरेका छन् । अधिकाशंको नाफा उचालिएको केही बैंकले गत आवको तुलनामा दोब्वर
मोबाइलबाटै यात्रा: बुद्ध एयरको टिकट बुकिङ एप्प
काठमाडौं । मोबाइलबाट नै टिकट बुकिङ गर्न मिल्ने किसिमको एप्प बुद्ध एयरले ल्याएको छ । सबै सेवा सुविधा दिने गरी एप्प सञ्चालनमा ल्याउनेमा बुद्ध एयर नेपाली विमान कम्पनीमै एक हो
बुलेट-कस्टमाइज्ड बाइकको अवतार (फोटो फिचर)
७ आश्विन २०७४, शनिबार
रोयल इन्फिल्डको कस्टमाइज्ड भर्सन : इन्डोनेशियाली बाइक कस्टमाइजर ह्वाइट कलर बाइकले रोयल इन्फिल्ड जीटी कन्टिनेन्टललाई यस्तो तरिकालृे कस्टमाइज गरेको छ । लाइटलाई थ्रीडी लुकः लाइट्सलाई यस्तो तरिकाले डिजाइन गरिएको छ
एप्पल अफिसका पहिलो पटक सार्वजनिक नयाँ फोटो
अमेरिकाको कूपर्टीनो शहरमा चर्चित आइटी कम्पनी एप्पलको नयाँ क्याम्पस तयार गरेको छ । यो क्याम्पस पहिलो पटक एप्पलको वार्षीक कार्यक्रम हुनेछ भने, यहाँ स्टिव जब्ज थिएटर बनाइएको छ । स्टिभ
चिनियाँ कम्पनीको ३६ अर्ब ७५ करोड नेपालमा लगानी
काठमाडौं – नेपालको सिमेन्ट उत्पादनमा चीनको एक निजी कम्पनीले ३६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । सरकार र चिनियाँ कम्पनी होङशिवम् सिमेन्टबीच नेपालमा सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्ने
बढ्यो बैंकको मुनाफा : २३ को मुनाफा एक अर्ब बढी
काठमाडौं – बाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक बर्षमा ४५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएका खबर आईतबारको कान्तिपुरमा छापिएको छ । वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका बैंकहरुमध्ये २३ को मुनाफा एक
एक वर्षमा ५१ अर्ब बराबरको सेयर निष्कासन
नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्ममा ५१ अर्ब बराबरका हकप्रद, आइपीओ र एफपीओ निष्काशन भएको छ । धितोपत्र बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा ७१ वटा संगठित संस्थाहरुले करिब
कारबाहीबाट जोगिन दिन छाडे बैंकले कर्जा
काठमाडौं । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) नाघेका वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि कारबाहीवाट बच्न ति बैंकहरुले कर्जा लगानी ठप्प पारेका छन् । केही बैंकहरुले
काठमाडौंमा शुरु ईपीएस भाषा परीक्षामा कति भए सहभागी ?
काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएसको आठौं भाषा परीक्षा काठमाडौंमा आजबाट सुरु भएको छ । शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन हुने परीक्षाका लागि कोरिया ईपीएस शाखाले २६ परीक्षा केन्द्र